Ama-antibiotic nokuzivocavoca umzimba: Ingabe ukusebenza ngama-antibiotic kuphephile? - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Inkampani, Izindaba Izilwane Ezifuywayo Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi, Inkampani Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Kuphephile ukuzivocavoca umzimba uma uthatha ama-antibiotics?
Kuphephile ukuzivocavoca umzimba uma uthatha ama-antibiotics?
I-Drug Info Workout Rx
Uma uke wanikezwa ama-antibiotic anqunyiwe, ungahle wazi ukuthi kukhona uhlu lwezinto ongadinga ukuzigwema ngenkathi uzithatha: utshwala, ujusi wamagilebhisi, ama-antacids noma izithasiselo ze-calcium , neminye imishanguzo kadokotela, efana nezinciphisi zegazi.
Into eyodwa okungenzeka ukuthi awukaze ucabange ngayo kabili ngokwenza ngenkathi usebenzisa ama-antibiotic, nokho, iyasebenza. Ukuzivocavoca umzimba kuhle emasosheni akho omzimba… kungani ungayeka ukukwenza ngenkathi usalulama ekutheleleni?
Yebo, ngoba amanye ama-antibiotic angadala imiphumela emibi engathinta ikhono lakho lokuzivocavoca ngamandla. Noma ngabe uyigundane elijwayelekile lokuzivocavoca, umgijimi wangempelasonto, umthandi wesikhathi esithile we-spin class, noma umgijimi oqeqeshwayo we-marathon, nakhu okudingeka ukwazi ngokusebenza kuma-antibiotic.
Kuphephile ukuzivocavoca ngenkathi uthatha ama-antibiotic?
Impendulo emfushane ithi, ngokuvamile, yebo: Ama-antibiotic amaningi aphephile ukuwathatha ngenkathi uzibandakanya nezinhlobo ezijwayelekile zokuvivinya umzimba, ngenxa yokuthi unempilo futhi uzizwa uphile ngokwanele ukuba ungavivinya umzimba. Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi umzimba wakho awusebenzi kahle kakhulu uma unesifo, ngakho-ke kunezinto okufanele uzicabangele kuqala.
Noma yikuphi ukutheleleka kuzobeka ingcindezi emzimbeni, kusho uMichael Billet, MD, ongudokotela womnyango ophuthumayo eMercy Medical Center eBaltimore. Ukuthi lokhu kuthinta kanjani isiguli kuzoxhomeka ezintweni eziningi, njengohlobo lokutheleleka, ubunzima baso, nempilo eyisisekelo yesiguli noma ezinye izindaba zezokwelapha.
Kunesigaba esisodwa esikhulu semithi elwa namagciwane okufanele uyiqaphele uma kukhulunywa ngokusebenza, futhi i-fluoroquinolones. Lesi sigaba semithi elwa namagciwane, okubandakanya ciprofloxacin (Cipro), ingasetshenziselwa ukwelapha izifo zokuphefumula, zesikhumba nezomchamo, kepha futhi bathwala ingozi enkulu yokulimala kwezemidlalo .
I-Fluoroquinolones [ingadala imisipha ebuthakathaka], futhi, uma ihlanganiswa nokuzivocavoca ngamandla noma ukuthwala isisindo kungaholela ekuhluphekeni, ekugwinyweni, nasekuqhekekeni kwethambo, kuxwayisa uDkt Billet, ongeza ukuthi le miphumela emibi ivame kakhulu lapho kufakwa i-fluoroquinolones imithamo ephezulu noma isikhathi eside, yize izifundo ezifushane zokwelashwa kungafanele zinganakwa noma.
Ngaphezu kwalokho, ngokungafani nama-antibiotic amaningi — asuswa ngokushesha emzimbeni — ama-fluoroquinolones asengadala ukulimala ngemuva kokuyeka ukuwaphuza.
Angibaniki abasubathi [ngoba] noma ungekho kubo, kukhona ingozi ehambisana nokulimala kwethenda isikhathi eside ngemuva kwalokho, kusho uJoshua Scott, MD, udokotela oyinhloko wezokwelapha kwezemidlalo eCedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute eLos Angeles.
TO Ukubuyekezwa kuka-2014 kushicilelwe ku- Ijenali Yokuqeqeshwa Kwezemidlalo ibika ukuthi i-fluoroquinolones inamandla okubangela i-tendinitis, ubuhlungu be-tendon, noma ukuqhuma kuze kube sezinyangeni eziyisithupha ngemuva kokuyeka ukusetshenziswa kwayo.
Ingabe izincomo ziyashintsha ngokuya ngohlobo lokuzivocavoca olwenzayo?
Hhayi njalo. Uhlobo lokuvivinya umzimba alubalulekile kunohlobo lwama-antibiotic; uma uku-fluoroquinolones, akufanele ngabe wenza noma yiluphi uhlobo lokuvivinya umzimba ngokulingene noma okukhulu, kepha leyo misebenzi ngokujwayelekile iphephile ngenkathi ithatha amanye amakilasi ama-antibiotic amaningi.
Ngamanye amagama, ukuzivocavoca umzimba okujwayelekile kuwe — noma ngabe ukuphakamisa izinsimbi, ukugijima, noma i-yoga — kulungile ukuqhubeka nokwenza uma usebenzisa ama-antibiotic i-penicillin noma azithromycin , inqobo nje uma uzizwa unqunyelwe yilo. Uma ungaqiniseki ukuthi imithi yakho ingayithinta kanjani inqubo yakho yokuzivocavoca, vele ubuze udokotela wakho.
Odokotela abaningi basebenzisa i-antibiotic evame ukunconyelwa ukutheleleka ngaphandle kokubheka ukuthi othile ungumqeqeshi we-crossfit, ugijima amamayela angama-40 ngesonto, noma uphila impilo esebenzayo, kusho uDkt. Scott, oweluleka ukwazisa udokotela wakho uma uzivocavoca umzimba ngaphezu komuntu ojwayelekile ngaphambi kokushiya nemithi kadokotela.
Iyini imiphumela emibi yokusebenza ngaphandle kokuthatha ama-antibiotics?
Ngaphandle kwengozi yokulimala kwezemidlalo ngama-fluoroquinolones, kuneminye imiphumela engemihle okufanele uyikhumbule.
Imithi elwa namagciwane ivame ukuthinta ipheshana le-GI, ibangele ukucasuka kwesisu kanye nesicanucanu, okungenza kube nzima ukuhlala unamanzi amaningi, kusho uDkt Billet. Le miphumela emibi mhlawumbe iyinkinga enkulu ngaphandle kokutheleleka uqobo.
Mayelana nokuthi inkambo yama-antibiotic ingakuthinta yini ukusebenza kwakho kwezemidlalo noma yenze ukukhathala kwakho kube kubi kakhulu, kunobunye ubufakazi obusendabeni obuningi kunobufakazi besayensi bangempela. UDkt. Scott uthi ezinye izifundo zikhombisile ukuthi ubudlelwano phakathi kokukhathala nokusetshenziswa kwama-antibiotic bungaba bukhulu kunabanye, njenge-doxycycline, kepha isifundo esidala esivela ku-1993 , okwenziwa kwabaqeqeshelwa ezempi, abakutholanga ukuxhumana phakathi kokukhathala okubonakalayo nokusetshenziswa kwama-antibiotic.
Ungakhohlwa ukuthi umzimba wakho uzobe usebenza kanzima uhambisana naleyomi-antibiotics ukulwa nokutheleleka — futhi ukuthi kungakwenza uzizwe ukhathele kakhulu kunokujwayelekile, futhi.
Ingabe ama-antibiotic angasebenzisana nezithasiselo zokuzivocavoca?
Ngokombono, yebo. UDkt. Scott uthi ukudla okuningi, iziphuzo, kanye nezithasiselo kungathinta ukuthi ama-antibiotic asebenza kahle kangakanani, ngakho-ke kubalulekile ukukhuluma nodokotela wakho nganoma iziphi izithasiselo zokuzivocavoca ozithathayo ngaphambi kokuba bakunikeze isibulala-magciwane.
Uma ungakaqiniseki, kungcono uyeke ukusebenzisa noma yiziphi izithasiselo uze uqede ama-antibiotic akho. Izithasiselo zivame ukuba namakhambi noma izithako ingaxhumana neminye imithi .
Izithako zokuzivocavoca umzimba zihlala ziqukethe i-caffeine, engaguqula ukusebenza kwe-antibiotic, kusho uDkt. Billet, futhi ngokulawula umthetho, izithasiselo eziningi zokuzivocavoca ziwela endaweni empunga yokudla okungekhona okwangempela, hhayi umuthi impela — ngakho-ke ngisho nakumthengisi ohloniphekile awazi kahle ukuthi uthola ini.
Kungani kubalulekile ukuphumula lapho ululama ekuthelelekeni
Noma ngabe can ukuzivocavoca ngemithi elwa namagciwane, akusho wena kufanele . Yize ukuzivocavoca umzimba kuyindlela enhle yokuqinisa amasosha akho omzimba, uDkt. Scott uthi ukuphumula ngenkathi welashelwa ukutheleleka futhi kuyisikhathi esihle sokuphumula… nokuthi uzoba ngcono ngokushesha uma uphumula.
Lapho amasosha akho omzimba kufanele alwe nezindawo ezahlukahlukene ezahlukahlukene — uthatha isibulala-magciwane, ulwe nesifo sesono, futhi usebenzise imisipha [ngesikhathi sokuzivocavoca] okufanele ilungiswe futhi ibuyiselwe — lokho kungaba nzima emzimbeni futhi kubambezeleke uyalulama, uyachaza.
Esikhundleni sokuqhubeka nokusebenza ngokuvama kwakho okujwayelekile noma ngamandla, sebenzisa isikhathi sokulala, uhlale unamanzi, futhi udle kahle. UDkt. Scott unezela ngokuthi ungafuna futhi engeza i-probiotic ekudleni kwakho , ukuqeda noma yikuphi ukucindezeleka kwamathumbu okubangelwa i-antibiotic.
ningathatha i-vicodin ne-percocet ndawonye
ungaphuza ubhiya ngenkathi uthatha i-metformin
isikhathi esingakanani ngemuva kokudutshulwa kwedepo kusebenza ngempumelelo
Nginganikeza ikati lami umuthi wokungezwani nokwelashwa
ungathatha i-motrin uphuze notshwala
ingabe i-apple cider uviniga iyayithinta umfutho wegazi